ADSS cable ကိုကောင်လေးအိမ်မှာရှိနေတဲ့
ACCC, ACSR ကောင်လေးအိမ်မှာရှိနေတဲ့
fiber optic ဖြန့်ဖြူး Box ကို 8 Core FODB-8A
drop ကြေးနန်း Clamp ODWAC-22
strain ညှပ် PA ဆိုပြီး-1500.1
FTTH တစ်စက်ညှပ်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်, ထိုသို့အပိုဆောင်း tools တွေမလိုအပ်ပါဘူး, handily ချိန်ညှိသတ္တုက S-ချိတ်အဖြစ်ကောင်းစွာ Cross-လက်မောင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းမှုကွင်းခတ်နှင့် FTTH ချိတ်အပေါ်ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
FTTH ပလပ်စတစ်ညှပ် D2 ပတ်ပတ်လည်နဲ့ပြားချပ်ချပ်ကေဘယ်လ်ကြိုးအတှကျအပလပ်စတစ်ကလစ်အချင်း 2,5-5 မီလီမီတာအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ပြင်ပ FTTH ကြိုးတွေ၏လူကြိုက်များပ္ပံအများစုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့2*5မီလီမီတာ, အရွယ်အစားသိရသည်။ အဆိုပါပလပ်စတစ်ကလစ် cable ကိုအတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လိုက်နာမှုပေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော fixation အာမခံထား။
Cable ကိုအရွယ်အစား, မီလီမီတာ
*5ပြားချပ်ချပ် 2
ပစ္စည်းများ: ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည် thermoplastic, သတ္တုက S-ချိတ်။
analog: DS2, GKN, DW-1070
ကျနော်တို့ FTTH cable ကိုညှပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောတစ်စက် cable ကို attachment များကိုများ၏အရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံအကွာအဝေးအာရုံစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
FTTH တစ်စက်ညှပ် D2 high quality, low price. D2 Clamp for suspension or tension round or flat FTTH fiber optic cable.
ယခင်: Suspension Clamp D8
နောက်တစ်ခု: Service Clamp STB
ဝါယာကြိုးညှပ် D2 drop
fiber optic cable ကို
fiber optic cable ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Clamp
ဝါယာကြိုးညှပ် ODWAC-26 drop
FTTH optical ဖြန့်ဖြူး socket ODP-02